Afaka mahazo valiny an-tserasera ve aho amin'ny tranokalako?
Tahaka anao ihany, nanontany tena aho hoe ahoana no ahafahana mahazo rindran-damina amin'ny tranokalako - ary hisoroka ny asa mampikorontan-tsaina be loatra amin'ny famoahana ny vola rehetra. Mazava ho azy, ny lionan'ny liona amin'ny webmasters sy ny tompona orinasa an-tserasera dia efa fantatra tsara fa ny fananganana lamàtra avo lenta dia mety ho fomba tokana hianjera eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana Google. Ny zavatra rehetra momba ny backlinks dia toa mazava ho ahy, afa-tsy fanontaniana iray tsotra - moa ve tena azo atao ny mamerina backlinks ho an'ny tranokalako tsy misy kolikoly? Ahoana ny fomba ahitanao ireo loharanom-pahefana ireo izay mety hampifandray anao amin'ny alalan'ny faniriany? Eny, izany indrindra no holazaiko aminareo.
Andeha hojerentsika. Ity manaraka ity dia fomba amam-pitaovam-pitsarana noforoniko tamin'ity taona ity mba hahazoana rohy mankany amin'ny tranokalako - tsy misy ny fandefasana hafatra, fifanakalozan-tserasera, na mandà an'Andriamanitra, mandany vola. Ary misy dingana telo tsotra izao tokony hanarahana ny fanatsarana ny tombony azo antoka amin'ny fananganana rohy amin'ny kalitao. Mariho fa ity tsikera ity dia tsy miraharaha ny indostrian'ny tranonkalanareo. Ireto misy izy ireo:
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny fikarohana ny tranonkala na mety ny loharanon-tserasera an-tserasera. Mariho anefa fa tsy misy ifandraisany amin'ny rohy rava ny drafitra malotoko. Tena tsotra ny zava-drehetra. Amin'ny ankapobeny, ny mety ho "tra-doza" mety ho antsika dia tsy maintsy mampiseho iray amin'ireo famantarana famantarana tsy misy fepetra ireo - fanakatonana tanteraka, anarana miovaova, nifindra tany amin'ny sehatra hafa, nahazo ny tolotra ara-barotra napetraka, na ny fanavaozam-baovao tsy tapaka.
Andramo ny hahita ny tranonkala tranonkala izay tsy manan-kery intsony. Midika izany fa matetika ny orinasa mahomby indrindra dia mampiato ny singa manokana (e. h. , ny Google Reader farany misakana azy). Na mety ho voamarika ihany koa izy ireo vao haingana. Raha raisina fa ny endri-javatra toy izany taloha dia malaza, tsy maintsy misy fonosana goavam-be amin'ny backlinks sarobidy miaraka amin'ireo tranonkala hafa. Mazava ho azy, ny hetsika dia tsy miasa afa-tsy raha tsy efa nofoanana ilay pejy web izay nampiantrano ny serivisy. Mba hahitana fahavoazana iray dia ampiasao ireo karazana fikarohana karazana toy ny asa fanompoana tsy misy; tranokala mihidy; Tsy misy intsony ny pejy; tsy misy intsony; Tsy misy tranokala intsony ity tranokala ity, sns.
Indray mandeha ianao nahita "tra-doza" tsara, izao dia fotoana hanaovana hetsika tena izy - tokony hitadiavana ny rohy manondro azy. Fenoy ireo URL rehetra tsy manadino (fa mbola miasa!) Any amin'ny kitapo fanalahidy rehetra ahafahana mamadika azy - fa ianao ihany no manapa-kevitra. Raha izaho kosa dia nampiasa fandalinana semalta aho handrafetana ny zavatra hitako ary hamita ny asako. Na izany na tsy izany, tokony hamarana amin'ny lisitra rehetra ny lisitry ny backlinks miasa any amin'ny kaontinao Excel.
Noho izany, manana ireo fahafahana sarobidy eo an-tanana ireo, fotoana izao handehanana kely kely. Midika eto aho fa ny hetsika farany dia ny manolo-tanana amin'ireo mpampiasa rehetra mbola mifandray amin'ny pejy web-nao amin'ny safidyo. Raha manao izany ianao, ny zavatra rehetra ilainao dia ny mandefa mailaka ny olona amin'ny rohy rehetra efa azony, ary soso-kevitra fa ny rohy vaovao anao dia mipetraka ao amin'ny pejin'ny tranonkala. Ary niasa aho! Faly be ny olona fa nanam-paharetana aho mba hitondra valiny roa - amin'ny fahitana ny zava-manahirana azy ireo ary mampiseho azy ireo ny asa mafy ataoko ahafahako mamerina ny rohy mankany amin'ny tranokalako Source .